बैंकमा पैसा राख्नु सरक्षित छ त ? यिनै हुन् बैंकका कर्मचारी जसले १६ लाख चोरी गरे – Nep Stok
बैंकमा पैसा राख्नु सरक्षित छ त ? यिनै हुन् बैंकका कर्मचारी जसले १६ लाख चोरी गरे
पुष २४, २०७८ शनिबार 146
काठमाडौँ । कर्मचारीकै मिलेमतोमा एनआइसी एसिया बैंकको लाखौँ रुपैयाँ चोरी भएको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार उक्त बैंकको नगद सङ्कलक काठमाडौँको काँडाघारी बस्ने प्रदीप खत्रीसहितका चार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि उक्त रहस्य खुलेको हो ।
उनले काठमाडौँ महानगरपाकिला–१० को कार्यालयबाट रु १२ लाख ४५ हजार र मेट लाइफ इन्योरेन्स शान्तिनगरबाट तीन लाख पचासी हजार गरी रु १६ लाख ३० हजार बैंक दाखिला गर्न जाने क्रममा लुटपाट भएको भनी प्रहरीमा सूचना प्राप्त भएको थियो । सो घटना पुस १८ गतेको हो ।
सोही आधारमा प्रहरी वृत्त बानेश्वर र महानगरीय अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीबाट अनुसन्धान गर्दा खत्रीमाथि शङ्का लागेपछि पक्राउ परेका थिए । उनीमाथिको अनुसन्धानमा मिलेमतोमा उक्त नगद चोरी गरी भागबण्डा गरेको फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए ।
प्रहरीले चोरीमा सङ्लग्न खत्रीसहित ललितपुर धापाखेल बस्ने वर्ष २४ को विमल तामाङ, रामेछाप घर भइ ललितपुर बस्ने राज पौडेल र अनिश खड्कालाई पक्राउ गरेको आज एक सूचना जारी गरी जनाएको छ । उनीहरूले सबै पैसा भागबण्डा लगाएर बाँडेको फेला परेको जानकराी दिँदै प्रहरीले अहिलेसम्म १३ लाख ४६ हजार फेला परेको र दुई लाख ८२ हजार भने खर्च गरेको खुलेको छ ।
Prevप्रेमबहादुर आलेको ठाडो निर्देशनमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्टका लागि निर्माण गरिन लागेका संरचना भत्काईदिए
Nextदक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन – हेर्नुहोस् पुस २४ गते शनिबारको राशिफल प्रकाशित मिति : शुक्र, पुस २३, २०७८
नेपाली मजदुर बोकेको बस भारतमा दुर्घटनाग्र’स्त, शिशुको मृत्यु, ५ जना घाइते
स्टेजमै कु’टिए चर्चित गायक राजेश पायल राई (भिडियो सहित)